KDE 4.13, Nepomuk နှင့် Baloo | Linux မှ
KDE 4.13, Nepomuk နှင့် Baloo
x11tete11x | | GNU / Linux များ, အခြား
ကောင်းပြီ၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာငါကအတုအယောင်သတင်းပေးပို့ခြင်းကိုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ KDE ၄.၉, Baloo နှင့် Nepomuk (တစ် ဦး ချင်းစီအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုရှင်းပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး)စတင်ကြပါစို့
1 Baloo ကဘာလဲ?
2 KDE 4.13 နှင့် Baloo
ချစ်သူ ၏ဆက်ခံသည် နီပေါကအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်, အဆုံးစွန်သော, အစားထိုးပါလိမ့်မည် RDF အရာဘောင်၌တည်၏ သီအိုရီ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ KDE developer တွေကလိုချင်တဲ့ရလဒ်မရဘဲတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်လက်ရှိကတည်းက nepomuk "Shared Desktop Ontologies" ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သင့်သည်ကိုမရှင်းလင်းသည့်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်နားလည်ရန်ခက်ခဲပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုပုံတူပွားရန်ခက်ခဲသည် RDF အားဖြင့်အစားထိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ချစ်သူ။ အဆုံးစွန်သောအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည် ဗိသုကာအတတ်ပညာ , နှင့်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကတိပေးထားတယ်။
KDE 4.13 နှင့် Baloo
အတွက်စကားပြော IRC de KaOS နှင့် ပုတ်သင် (စကားမစပ်၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားရှင်းပြရန်အလွန်ကြင်နာသည်) ဤ OS ကိုပြုစုသူကကျွန်ုပ်စုစည်းနိုင်သည်ဟုပြောပါသည် KDE 1 beta ကို 4.13 အပြစ် Nယုဇန y Baloo နှင့်အတူ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် 100% နှင့်အလုပ်လုပ်သော KDE ဖြစ်သည် ချစ်သူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလေးပေး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပုတ်သင် သူကငါ့ကိုပြောတယ် nepomuk y ချစ်သူ သူတို့ပြေးနိုင်တယ် အတူတူ, ဒါကြောင့်မူတည်သည် သက်သက်သာနှင့်သီးသန့် de ဘယ်လိုလဲ သင် compile ၌ရှိ Distro KDE ၄.၉ဒါကသူတို့ကိုသူတို့ပြေးနေတယ်လို့ထင်စေနိုင်တယ် ချစ်သူ အဖြစ်မှန်၌သူတို့ကိုအောက်မှာအသုံးပြုသောအရာဖြစ်ကြ၏ ချစ်သူ (လင်းပိုင်လို) နှင့်အခြားသူများ nepomuk သူတို့ကသေး ported မခံခဲ့ရလို့ပဲ ချစ်သူ သို့မဟုတ်သော distro ရိုးရှင်းစွာကစောင့်ရှောက်ရန်လိုသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် nepomuk (ဒီဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ပလာစမာမီဒီယာစင်တာ ဒီတစ်ခု KDE အတွက်ဖြစ်ခြင်း nepomuk မပါဘဲ, NO အကျင့်ကိုကျင့်၏ထို့နောက်စားသုံးမှုအကဲဖြတ်မီ RAM နှင့် Baloo စွမ်းဆောင်ရည် သင့်ရဲ့ distro compile လုပ်သေချာပါစေ အပြစ် nepomuk နှင့်အကောင်းဆုံး။
Distro တစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါဒီဟာကသင့်ကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီပြofနာအမျိုးအစားနဲ့တူတူပါပဲ၊ Gentoo / Funtoo လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရရှိသည်။ ဤအမှု၌ KDE ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်မြင်သောအခါ၎င်းသည်မည်သို့ပြုစုသည်ဆိုခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် distro တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုအနေနှင့် KDE ၏အပြုအမူသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ယခုမှစ။ ငါမျှော်လင့်ထား ပုတ်သင် သူကငါ့ကိုပြောတယ် ချစ်သူ RAM consumption သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချပုံရသည်နှင့် indexer သည် ပို၍ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင့်အားဖတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည် ဒီ မှပံ့ပိုးသူတစ် ဦး ကပြုလုပ်စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားဆောင်းပါး, ရန် FromLinuxဤကိစ္စများနှင့်ဆက်စပ်သောသော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » KDE 4.13, Nepomuk နှင့် Baloo
Nepomuk ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူး၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြ,နာဖြစ်စေသည်။ ယခု၎င်းသည် KDE နှင့်ဖြန့်ချိခြင်းကိုတပ်ဆင်သောအခါပထမဆုံးပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ရှိသော KaOS သို့သွားပါ။
ငါအဲဒါကိုသုံးပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ဒီနာရီကို boot မတူတဲ့နေရာမှာအခြားဖြန့်ချိတဲ့အချိန်တွေမှာတစ်ပြိုင်တည်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ Linux ကို ၀ င်လာရင် ၃ နာရီကနေ ၄ နာရီအကြာမှာ၊ Windows ကို ၀ င်ရင် ၃ နာရီ ၄ နာရီနောက်ကျပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရမယ်။
Yoyo ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကကျွန်တော့်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျော်လွှားခဲ့သည်
ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ nepomuk ၃-၄ ကြိမ်ကငါ့ကိုပြproblemsနာတွေ (အထူးသဖြင့် KDE ရဲ့ပထမဆုံး version တွေမှာ) ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆောင်းပါးမှာရှင်းပြထားတာကတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အခုချိန်မှာ mbb ၇၀ mb စားသုံးထားတဲ့ indexed files ၃၂၁၃၅ ခုနဲ့အတူ။ ၏။
KaOS အတွက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် KaOS တွင်တပ်ဆင်။ မရနိုင်သော 32-bit ပရိုဂရမ်နှစ်ခုကိုမှီခိုပါသည်။ နာရီနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် KaOS နှင့်ပြaနာမဟုတ်ပါ၊ Windows သည် UTC တွင်အလုပ်လုပ်သောနာရီကိုမည်သို့စီမံသည်နှင့်အမျှ .. နှင့် windows သည် localtime နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ သင့်တွင် windows7ရှိပါက windows သို့ UTC ပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အထူးသဖြင့် KaOS စနစ်သည် UTC ကိုအသုံးပြုသည်။ Kubuntu သည် Upstart ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် localtime ကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ပြproblemsနာမရှိပဲ») Windows 8 နဲ့ဒီနည်းလမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။ win7နဲ့အတူအဆင်ပြေတယ်
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Windows က localtime ကိုထူးဆန်းစွာကိုင်တွယ်တာပါ။ SystemOS distros တွေလိုပဲ KaOS က UTC ကိုကိုင်တွယ်တာပါ။
ငါမှာ Windows Vista နှင့် Debian Wheezy တို့တွင်အလားတူပြhadနာရှိခဲ့သည်။ သို့သော် Debian သည် UTC ကိုအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် Windows ကိုမူသုံးသည်မဟုတ်ပေ။ UTC ကိုသွားဖို့ Windows မှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အဖြေကတော့ဒီမှာပါ.
KaOS မတိုင်မီက KDE သည် #Gays အတွက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အခြားယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်သော Chuck Norris စတိုင်နှင့် KDE ကိုတွေ့ပြီ။
hahahaha xD, ကောင်းတာက KaOS ဟာ ၁၀၀% Baloo going ဖြစ်မယ်ဆိုတာပါပဲ
၎င်းသည် mandriva နှင့်သူ၏လိင်တူချစ်သူအနုပညာလက်ရာများအတွက်ဖြစ်သင့်သည်၊ openSuse သည်ငွေဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော alpha အထီးများအတွက်အမြဲဖြစ်သည်။
ps: kaOS သည်ချစ်စရာကောင်းပေမယ့်ယောက်ျားလေးက LOL မဟုတ်ဘူး
yoyo manjaro နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ ... ဘာမှအဘို့
ငါက nepomuk (သို့) kdewallet မပါဘဲ KDE ကိုသုံးချင်သည် (သို့သော်အချို့သောအရာများ) သို့သော် Debian ကဲ့သို့သောဝါးပြီးသော distro ကိုသုံးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည် desktop နှစ်ခုလုံးကိုချိုးဖျက်ခြင်းမပြုပဲဤအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုပါ။
PS: ဤတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည် KDE ရင်းမြစ်များကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အလုပ်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိရန်၎င်းတို့ကိုအလုပ် လုပ်၍ လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။ ရလဒ်ကောင်းလား
ငါ kaos build repo ဆီကိုပို့ပြီးသား demm 4.13 100% baloo လားမင်းသိပြီ။ ငါတည်ဆောက်ဖို့ပို့မယ်လို့ငါစဉ်းစားနေတယ်။
ဟုတ်ပါသည်၊ KDE 4.13 beta ကို [kde-next] repo မှ KaOS တွင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုပါက [build + repo] နှင့်လိုက်ပါရမည်။
ထိုအဟုတ်, ဒီ 4.13 beta ကိုပြီးသား Baloo နှင့် Nepomuk မပါဘဲလာပါတယ်
ဝါရှင်တန် Indacochea: D ဟုသူကပြောသည်
သတင်းအချက်အလက်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် UbuntuStudio 14.04 ကို install လုပ်ပြီး၊ လင်းပိုင်ကိုလည်း install လုပ်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် search feature ကတော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူက UbuntuStudio 12.04 နဲ့ 13.10 မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ kubuntu လိုင်းမှာရှိတဲ့ XChat IRC ကိုမေးရင်တော့သူတို့ကပြောပါ့မယ်။ ငါ့မှာ baloo install လုပ်ထားပြီ။ ဒါကဒါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါကလင်းပိုင်ဘာမှမရှာဘူး၊ အခုဒီနေရာမှာဒီတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတာကဒီ application အသစ်ဟာကောင်းကောင်းပြုစုထားခြင်းမရှိသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်ရှာဖွေတာကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ကနောက်မှ fix လိမ့်မယ် ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်လင်းပိုင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Nautilus ထက်ပိုမိုလျင်မြန်သောကြောင့် (ဤလက်ပ်တော့တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်၎င်းသည် Dropbox နှင့် Dolphin ရှိသောကြောင့် Nautilus ကိုအမြဲသုံးသည်)
Washington Indacochea D ကိုပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ဤမေးခွန်းများအတွက်ဖိုရမ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဖိုရမ်သို့ချိတ်ဆက်ပါ
ငါအခြားပို့စ်တွင်ဖတ်ခဲ့သကဲ့သို့ငါရှာဖွေရေး Nepomuk တာဝန်ခံခဲ့သည်, ဤ Baloo အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒီမှာ UbuntuStudio အတွက်ရှာဖွေရေးငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ငါတနေ့ကပြန်အလုပ်လုပ်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
[ဂိမ်း] 'ဒါဟာအာကာသကလာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုစားတယ်' ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တတ်နိုင်သမျှရှင်သန်။